How to make people like you ~ Dhan Chochangi - Keep Learning
2:51:00 pm Book Summary No comments
अहिलेको एकदमै व्यस्त युगमा अरुहरुको मन पर्ने व्यक्ती बन्ने कुरा निकै गाह्रो तर धेरै महत्वपूर्ण मध्येको एक हो । यसैबारेमा निकै गुगल सर्च मैले पनि गरेको छु । धेरै रिसर्च र खोजि पश्चात् एउटा किताबबाट मैले निम्न RULES यहाँनेर सबैसमक्ष share गर्न चाहन्छु ।
4 Rules, that make people like you
#1 Easily BecomeaGood Conversionalist
Newyork Telephone Company को एक ग्राहक बारम्बार कम्पनीलाई फोन गरेर तनाव दिइरहने गर्दथ्यो, बिलको पैसा पनि तिर्दैनथ्यो, पत्रीकामा चिठि लेखेर कम्पनिको खेदो खन्ने गर्दथ्यो साथै उसले कम्पनी विरुद्द मुद्दा पनि हालेको थियो । त्यसपछि कम्पनीद्वारा एक अनुभवी troubleshooter लाई situation handle गर्न लगाइयो । उनी Dale Carnaige (किताबको लेखक) को विद्यार्थी पनि थिए । उनको नाम Lary थियो । Lary ले उक्त ग्राहकसँग भेट गरे र भेटमा उनले ग्राहकको सबै कुरा ध्यान दिएर सुने साथै agree गरिरहे । त्यस भेटमा ग्राहकले ३ घण्टासम्म रिसाएरै कुरा गरिरह्यो तर पनि Lary ले कम्पनीको defence मा केहिपनी बोलेनन् ।
त्यसपछी उनले पुन: उक्त ग्राहकको अन्तर्वार्ता लिए । यसपटक पनि पहिलेजस्तै नै भयो । उनले फेरि अर्को अन्तर्वार्ता लिए । अन्तर्वार्ता अवधिभर Lary ले केही बोलेनन् केवल ग्राहकको कुरा सुन्ने मात्रै काम गरे । यसरी उनले जम्मा जम्मी ४ अन्तर्वार्ता लिए । चौथो अन्तर्वार्ता सक्नुअघी नै उक्त ग्राहकले Lary लाई उसको एउटा संस्थाको charter member बनाइसकेको थियो । त्यस संस्था Telephone Subscribers Protective Association हो । Lary ले ग्राहकको हरेक कुरा धैर्यताकासाथ सुनिरहे न कि बिचमा बोलेर argue गरे । सायद यसै कारणले गर्दा उक्त ग्राहकको सबै रिस हरायो र Lary लाई best friend मान्न थाल्यो, त्यति मात्र होइन उसले कम्पनी विरुद्द दिएको मुद्दा पनि फिर्ता लियो र पुरानो बिलहरु पनि खुशीसाथ भरिदियो ।
प्रस्तुत कथामा ग्राहकले आफुले आफैलाई एक defender सोचिरहेको थियो । उसलाई लागेको थियो कि उ अरुको लागि संघर्ष गर्दैछ तर वास्तवमा उसलाई एक listener चाहिएको थियो । listener को रुपमा Lary ले महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाए । यसरी नै मानिसहरुलाई कैयौ पल्ट डिप्रेसनमा जान लागेको हो कि, डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने हो कि जस्तो पनि लागिरहेको हुन्छ तर वास्तवमा एउटा सुनिदिने व्यक्ती चाहिएको पनि हुन सक्छ तर आजकलको व्यस्त युगमा राम्रो listener कहाँ पाइन्छ र ! त्यसैले तपाईं पनि राम्रो listener भएर likeable तथा respectable व्यक्ती बन्न सक्नुहुन्छ ।
• Rule 1: Beagood listener and encourage others to talk about themselves.
#2 Never Do This and Avoid Trouble
एक देशमा सबैभन्दा धनी व्यक्ती थिए । उनलाई त्यस जमानामा Steel Industry को King को रुपमा चिनिन्थ्यो । उनको कम्पनीमा उनको under मा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरु उनिभन्दा अझै बढी knowledgeable र smart थिए तर उनी सँग व्यक्तिहरुलाई handle गर्ने leadership quality र social skill एकदमै राम्रो थियो ।
वचपनमा उनले एउटा आमा खरायो किनेर पालेका थिए । पछि त्यसले अरु बच्चा खरायोहरु पनि जन्माएपछी तिनिहरुलाई खुवाउनको लागि उनी सँग केही पनि थिएन । त्यसपछी उनले आफ्नो छिमेकको बच्चाहरूलाई 'बच्चा खरायोलाई खाना ल्याउ, खरायोको नाम तिमिहरुकै राख्नेछु' भने । बच्चाहरु यो सुनेर खुशी हुँदै उनको कुरा मान्न तयार भए । त्यतिबेला उनले एउटा व्यक्तिको लागि उसको नामले कती महत्व राख्दछ भन्ने कुरा सिके । पछि गएर उनले यहि सिद्धान्त आफ्नो व्यवसायमा पनि लागू गरे, जसले उनलाई फाइदा पनि भयो । उनले Pennsylvania railroad लाई स्टिल बिक्री गर्नुथियो । त्यसपछी उनले एउटा नयाँ factory खोले र त्यो factory को नाम Edgar Thomsan Steel Works राखे । Edgar Thomsan चाहिँ pennsylvania railroad का president को नाम थियो । यो कुरा थाहा पाएपछी Edgar Thomsan ले सबै स्टिल सोही कम्पनी Edgar Thomsan Steel Works बाट नै खरिद गरे ।
पहिला पहिलाका धनाढ्य व्यक्तिहरुले लेखकहरुलाई किताबमा आफ्नो नाम राख्नको लागि पैसा दिनेगर्दथे । आजकल पनि मान्छेहरु आफ्नै नाममा व्यवसायहरु स्थापना गरिरहेका हुन्छन् । मानौं हामी कसैसँग भेट भयौ, नाम सोध्यौ तर राम्ररी याद नै गरेनौ । फेरि उनीहरुको आवश्यकता पर्दा फेरि नाम सोध्नुपर्यो भने खल्लो हुन्छ किनकी एउटा व्यक्तिको लागि उसको नाम एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, थोरै इफोर्ट लगाएर भएपनी व्यक्तिहरुको नाम याद राख्ने वानीले हामीलाई likeable त बनाउछ नै यसको साथै व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण मद्दत गर्दछ ।
•RULE 2: Always remember people's name.
#3 How to Interest People
Edward भन्ने एकव्यक्ती Boys cut group को सक्रिय सदस्यका रुपमा रहेका थिए । Boyscut एक संस्था हो जहाँ युवाहरूलाई फरकफरक तालिम दिएर skill बढाउने काम गरिन्छ । जस्तैः surviving skill, leadership skill etc..
Edward को आफ्नो ग्रुपबाट कम्तिमा पनि एकजना अब युरोपमा हुँदै गरेको बृहत् boys cut event मा जान पाओस् भन्ने चाहना थियो । तर आर्थिक अभावको कारण उनले एउटा corporation को president सँग कुरा गर्ने सोच बनाएका थिए । president सँग भेट्नुअघी president को बारेमा उनले केही research गरे । Research बाट president ले एक पटक 1 million को चेक लेखेको तर cancel भएर फ्रेममा सजाएको कुरा थाहा पाए । Edward लाई यो कुरा निकै रोचक पनि लाग्यो । त्यसैले president सँगको भेटमा उनले उक्त चेक हेर्न अनुमती मागे । त्यसपछी उनले तारिफका साथ विस्तृतमा सबै कुरा सोधे । त्यसपछी दुवैले चेकसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु गरे । त्यतिखेर सम्म पनि Edward ले आफ्नो कामको बारेमा बोलेनन् । पछि president आफैले सोधेपछी उनले सबै requirement हरुबारे बताए । पछि, president ले एक जनाको लागि नभइ ६ जनाको लागि युरोप जाने fund तथा Edward स्वयं पनि जानको लागि fund उपलब्ध गराइदिए । यसरी व्यक्तिको interest लाई ध्यानमा राखेर कुरा गरेको हुनाले यो सम्भव हुन गयो ।
तसर्थ, थोरै समय निकालेर व्यक्तिको interest तथा excites थाहा पाउने कोसिस गर्नुपर्दछ, जसले तपाइलाई gentleman बनाउछ ।
•Rule 3: Talk in terms of the other people's interest.
#4 How to make people like you
यसमा माथी बताइएका १, २ र ३ का सबै कुराहरु पर्दछन् । जस्तै :
-Beagood listeners
-Letting them talk more
-Talking other interests
-Remembering Birthday etc
सबै व्यक्तिलाई आफुमा एउटा गुण राम्रो भएको लाग्दछ तसर्थ त्यो point लाई मध्यनजर गर्दै त्यसको तारिफ गर्नु भनेर यश सिद्धान्तले भन्छ किनकी "Very few make other feel important"
त्यसैले अरुले आफुलाई राम्रो ठानेको देख्न चाहनेले अरुलाई पनि राम्रो ठान्ने, important feel गराउने आदि गर्नुपर्दछ । यो नै most powerful technique हो ।
•Rule 4: Make others feel important
हवस् त आजलाई यति नै आजको यो ब्लग पोष्ट कस्तो लाग्यो । यो Book summary मैले How to win friends and influence people नामक पुस्तकबाट लिएको हु , यसका लेखक Dale Carnegie हुन् । यो किताब अनलाइन मार्फत किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ ।
see you on next blog post. Haveanice day !
(Translated from Youtube channel seeken)
किताब किन्न तल क्लिक गर्नुहाेस् ।